I-Pokémon GO APK - apkleaks.com
ikhasi lasekhaya ›
I-Pokémon GO APK
Hamba ngaphandle bese ubamba i-Pokémon ezweni langempela! Qoqa & ulwa nabanye.
thwebula APK (89.65 Mb)
yesiqinisekiso ukufakwa ephephile, kungekho izikhangiso kwalokho noma i-malware
Joyina Abaqeqeshi emhlabeni wonke abathola i-Pokémon njengoba behlola izwe elibazungezile. Isibuyekezo esisha kunazo zonke ku-Pokémon GO, inzwa yokudlala yomhlaba wonke elandelwe izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingu-750 futhi ibizwa ngokuthi "I-Best Hambayo Game" ngemiklomelo ye-Game Developers Choice kanye ne-"App Best of the Year" yi-TechCrunch, ithumele isipiliyoni esithuthukisiwe se-Gym gameplay, kufaka phakathi nethuba lokujoyina nabanye ukulwa nePopémon enamandla kwi-Raid Battle feature!
Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu, namanye ama-Pokémon amaningi atholakale!
Manje ithuba lakho lokuthola nokulithatha I-Pokémon ikuzungezile-ngakho thola izicathulo zakho, uphume ngaphandle, uphinde uhlole izwe. Uzojoyina elinye lamathimba amathathu nempi yobunikazi be-Gyms nge-Pokémon yakho eceleni kwakho.
Pokémon kukhona ngaphandle, futhi udinga ukuthola. Njengoba uhamba eduze komakhelwane, i-smartphone yakho izodlidliza uma kune-Pokémon eseduzane. Thatha umgomo bese uphonsa i-Poké Ball ... Uzodingeka uhlale uqaphile, noma kungenzeka uhambe!
Sesha kabanzi futhi nge-Pokémon kanye nezinto
Ezinye i-Pokémon zivela eduze nemvelo yazo-bheka i-Water-type Pokémon ngamachibi nolwandle. Vakashela i-PokéStops ne-Gyms-etholakala ezindaweni ezithakazelisayo ezinjengamamyuziyamu, ukufakwa kobuciko, izimpawu zomlando, nezikhumbuzo-ukubeka imali kwi-Poké Balls kanye nezinto eziwusizo.
Ukubamba, ukuxosha, ukuguqulwa, nokuningi
Njengoba uphakamisa, uzokwazi ukubamba i-Pokémon enamandla kakhulu ukuqedela i-Pokédex yakho. Ungangezela kuqoqo lakho ngokuqeda ama-Pokémon Amaqanda asekelwe emabangeni ohamba ngawo. Siza i-Pokémon yakho iguquke ngokubamba izinhlobo eziningi ezifanayo. Khetha i-Buddy Pokémon ukuhamba nayo futhi uthole i-Candy ezokusiza wenze i-Pokémon yakho ibe namandla.
Thatha izimpi ze-Gym futhi uvikele i-Gym yakho
Njengoba i-Charmander yakho iguqukela kuCharmeleon bese i-Charizard, ungakwazi ukulwa ndawonye ukuze unqobe i-Gym futhi unike i-Pokémon yakho ukuyivikela kuwo wonke umuntu. Ungabamba iqhaza kuma-Raid Battle at Gyms emhlabeni jikelele. I-Raid Battle iyinhlangano yokudlala ye-gameplay ekhuthaza ukuthi usebenze nabanye abaqeqeshi abangaba ngu-20 ukunqoba i-Pokémon enamandla kakhulu eyaziwa ngokuthi i-Raid Boss. Uma uphumelela ukunqoba empini, uzothola ithuba lokubamba i-Pokémon enamandla eyakho!
Isikhathi sokuhamba-izenzakalo zakho zokuphila kwangempela zilindele!
- Lolu hlelo lokusebenza lukhululekile futhi luhlinzeka ngokuthengwa kwamageyimu. Ilungiselelwe ama-smartphone, hhayi amaphilisi.
- Iyahambisana namadivaysi e-Android anama-2GB RAM noma ngaphezulu futhi abe ne-Android Version 4.4-7.0 + efakiwe.
- Ukuhambisana akuqinisekisiwe kumadivayisi angenawo amandla we-GPS noma amadivayisi axhunyiwe kuphela kumanethiwekhi we-Wi-Fi.
- Ukuhambisana namadivayisi wethebhulethi akuqinisekisiwe.
- Isicelo singase singasebenzi kumadivayisi athile ngisho noma kunezinguqulo ezihambisanayo ze-OS ezifakiwe.
- Kunconywa ukudlala ngenkathi kuxhumeke kunethiwekhi ukuze uthole ulwazi olunembile lendawo.
- Ulwazi lokuhambisana lungashintshwa noma kunini.
- Sicela uvakashele ku-www.PokemonGO.com ngolwazi olwengeziwe lokuhambisana.
- Ulwazi lwamanje kusukela ngo-1 Julayi, 2017.
Thomas & Friends: Magic Amaculo APK
Dlala imidlalo encane no-Thomas & Friends ™ futhi wakhe isethi yakho yesitimela esethiwe!
Ama-Ancient Aliens: I-APK ye-Game
Siza abafokazi basendulo abambe abantu, bashintshe i-DNA yabo futhi bakhe amapiramidi.
I-Fort Boyard Run APK
Gijima, gxuma futhi ulandele izicupho ukuze uqoqe Fort Boyars!
Uthando Tangle / Ingabe Sizofika? I-APK
Ulungele ukuboshwa engxenyeni engathandekayo yothando?
I-Crab War APK
Hlanganisa, Hlanganisa futhi Ungabonakali Isibhamu!
Isikhathi esinzima (i-Prison Sim) i-APK
Ukuzama ukuhlala ejele lapho yonke imisho isigwebo sokufa!
I-Guy yomndeni I-Quest For Stuff APK
Dlala mahhala futhi uhambisane nezinhlamvu zakho eziyizintandokazi ze-FG ukuze ulondoloze i-Quahog!
Wake wafuna ukuzizwa njengo-Alice ku-Wonderland?
I-BTS V Skate APK
Kwabalandeli be-BTS no-K pop
Ungasinda - Amaholide APK
Lungele ukuphunyuka kuzo zonke izindawo ezinokwenzeka ezizinikezelwe kumaholide ahlukene!
I-Flutter: i-Butterfly Sanctuary APK
Phakamisa ama-butterflies ngokusebenzisa umjikelezo wabo wokuphila ongakahleki emanzini akho!
I-APK yomgijimi wezepolotiki
Siza Abantu & Umsebenzi Wakho Wezombangazwe Esikhathini Sokugijima Kwezombangazwe Egcwalisiwe
I-Lost Chambers Aquarium APK
Qalisa uhambo olumangalisayo nge-Lost Chambers Aquarium.
I-Atlantis Adventure APK
I-Atlantis Adventure i-marble blaster game mahhala ku-playstore
I-Slender: I-APK yokufika yokugcina
I-Slender: Ukufika Okugcina